नीमको उपयोगिता के छ ? ~ विज्ञान संसार
नीमको उपयोगिता के छ ?
Posted by Om Bhandari On 1:55 AM
प्राकृतिक विविधताले भरिएको हाम्रो देश नेपालमा, विभिन्न विशेषता बोकेका रुख विरुवाहरु अर्थात् वनस्पति पाईन्छन् । नेपालमा थुप्रै प्रकारका जडीबुटी पाइने भएता पनि यसको पूर्ण उपभोग र यसबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण भनेको यसलाई उपयोगजन्य बनाएर प्रचार प्रसार नगरिनु देखिन्छ । बजारमा रासायनिक प्रविधिका निकै महंगो र मानव शरीरलाई दीर्घकालीन हानी पु¥याउने औषधीहरुले नै प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । उता आफ्नै भूमिमा पाइने अनेकौं रोगहरु निको पार्ने जडीबुटी भने ओझेलमा परेका छन् , जसको प्रयोग गर्नाले शरीरमा कुनै अप्राकृतिक हानी नगरी आर्थिक भार समेत कम हुन्छ । नेपालमा यस्ता औषधीय गुण बोकेका थुप्रै जडीबुटी र वनस्पतिहरु पाइन्छन् । यस्तै गुण बोकेको वनस्पति मध्ये नीम पनि एक हो । यो नेपालको पहाडी र तराईका भू भागमा पाइने वनस्पति हो । अन्य रुख विरुवाहरुको तुलनामा वायुमण्डल तथा पर्यावरणलाई शुद्ध बनाइ राख्ने क्षमता नीममा लुकेको हुन्छ । यस बाहेक नीममा यति धेरै औषधीय गुणहरु हुन्छन् जसको पहिचान गरेर प्रयोगमा ल्याउन सके निकै फाइदा हुने प्रमाणहरु सिद्ध भएका छन् ।
मानिसको शरीरमा देखिने छालाको रोग, दाँतको रोग, घाउ खटिरा, तथा रक्त विकार जस्ता विभिन्न रोगहरुदेखि लिएर अन्न बालीमा लाग्ने रोगहरुको समेत नीमबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । नीम यस्तो वनस्पति हो, जसको पात, डाँठ, बोक्रा, जरा, फलफूल सबै अंगमा औषधीय गुणहरुले भरिपूर्ण हुन्छ । यिनै विविध गुणहरुले गर्दा यसलाई औषधीय वनस्पतिको नामले समेत चिनिन्छ । आयुर्वेदले नीमलाई प्रकृतिको अनुपम उपहार मानेको छ । अझ भनौं, यसको तुलना अरु कुनै साधारण वनस्पतिसँग हुन सक्तैन । यसको विशेषता भन्नु नै आफ्नो गुण र महत्वलाई कहिल्यै पनि कमी हुन नदिनु हो । प्राचीन कालदेखि नै मानिसहरुको घर आँगन र बारी÷कान्लामा यसले आफ्नो ठाउँ ओगेटेको देखिन्छ । नीम आयुर्वेदमा मात्र नभई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालको ग्रामीण समुदायमा नीमको लोकप्रियता सँधै अग्रपंक्तिमा रहेको छ । यसको तेलमा मात्र कीटनाशक क्षमता नभएर पात तथा बोक्रामा पनि त्यतिनै गुणहरु विद्यमान रहेका छन् । अन्य बालीको भण्डार गर्दा नीमको पात मिसाएर भण्डार गर्नाले कीरा लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।
हाम्रो खेत बारीमा लगाएका बालीहरुमा पनि विभिन्न कीराहरु लागेर बालीनाली नष्ट गर्दछ । त्यस अवस्थामा नीमको पात तथा बोक्रा कुटी पानीमा मिसाइ उक्त कीटाणु लागेको बालीहरुमा छर्कनाले कीराहरु समेत हराउँदछ । घर, आँगन, कोठा आदिमा पनि भुसुना सुलसुले जस्ता कीराहरु छन् भने नीमको बोक्रा र पात बालेर त्यसको धुँवा र खरानी प्रयोग गर्नाले कीराहरु हराउँदछन् । शरीरको कुनै अंगमा लुतो, घाउ, खटिरा निस्केमा नीमको बोक्रालाई मसिनो हुने गरी कुटेर लेदो बनाई नियमित ४-४ दिन उक्त घाउ खटिरामा लगाउनाले छिट्टै निको हुन्छ । नीम भरपर्दो एण्टिसेप्टिक समेत भएकोले शरीरको कुनै अंग काटिएमा यसको पातलाई पिसेर लगाउँदा अन्य संक्रमण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । नीमको स्वाद तीतो हुन्छ, त्यसैले यसको पात, डाँठलाई पिसेर रस बनाई नियमित सेवन गरे मधुमेहका रोगीहरुका अतिरिक्त विकारलाई समेत नष्ट गरी रगत सफा बनाउन मद्दत गर्दछ । दाँत हल्लने, गिजा सुन्निने र दाँत माझ्दा रगत आउने रोग छ भने दैनिक नीमको डाँठ प्रयोग गरी दाँत माँझनाले उक्त रोगहरुबाट बँच्न सकिन्छ । शरीरमा स-साना डावर वा एलर्जी भएको बेला यसको पातको खरानी वा रस लगाएमा निकै आराम हुन्छ । यही निमलाई आधुनिक चिकित्सा र परिवार नियोजनका लागि पनि प्रयोगमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ । छातीको ब्रोङक्राइटिस, घाँटीमा निस्कने खटिरा, नाक भित्र घाउ निस्केमा नीमको डाँठको बोक्रा निकालेर मुख बन्द गरी निकै समय लगाएर चपाउने गरे उक्त समस्याहरु हटेर जान्छन् । नीममा भएका यिनै अनेकौं गुणहरुले गर्दा यसको महत्वलाई बुझी यसको उचित संरक्षण र प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । जसको सम्बद्र्धनबाट हाम्रो विग्रदो पर्यावरणलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ ।
के जीव सृष्टिको फरक धार हुन सक्छ ?